Train Travel Tips Archives | စာမျက်နှာ3၏ 14 | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်စစ် Self-အလိုလိုကျလှနျးခွငျးနှင့်အလိုအလျောက်မှာတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွား. ဒါဟာလာနှငျ့သငျအဖြစ်သွားကြဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ကျေးဇူးပြုပြီးင်, ချထားသော, စိတ်ကူးကြာကြာတစ်နေရာတည်းတွင်နေထိုင်နှင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်က်ဘ်ဆိုက်များကိုကျော်သွား; သငျသညျနှောင့်အယှက်မပေးနိုငျခဲ့ပါလျှင်. သငျသညျလုပ်ဖို့လိုအပ်တစ်ခုတည်းသောလိုက်လျော…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ သင်တို့ရှိသမျှသည်သိသည့်အတိုင်း, ဗင်းနစ်ဥရောပသားအပေါင်းတို့အတွက်အများဆုံးထူးခြားကြည်နူးဖွယ်မြို့ဖြစ်၏, လျှင်မကမ္ဘာတွင်. အီတလီတူးမြောင်းနှင့်အသေးစားကျမ်းပိုဒ်ထဲကလုံးဝဖန်ဆင်း, အားလုံးကျွန်းတစ်ကျွန်းအပေါ်ထားတဲ့မုသား၏. This has turned the town into one of…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ပြင်သစ်ဆွဲဆောင်မှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရန်နေရာဖြစ်သည်. ပဲရစ်အတွက်အထင်ကရ Eiffel မျှော်စင်ကနေ Nice ၏ pebbled ကမ်းခြေရန်, မမှအဆုံးမဲ့အရာတိုင်းပြည်. သင်တို့မူကားတစ်ဦး layover အပေါ်သွားရောက်လည်ပတ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုပါလျှင်, or you have already checked out of your hotel…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ အမ်စတာဒမ်အလည်အပတ်ခရီးတစ်ခုခမ်းနားသောမြို့ဖြစ်၏. သငျသညျဖြစ်ကောင်းပျင်းရဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုမြင်ကဒီမှာလုပ်ဖို့သိပ်ရှိပါတယ်. သို့သျောလညျး, ကတုန်းပဲအမှုအရာထရောမွှေဖို့အကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်. That is because Amsterdam isagreat starting point for several amazing…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ...
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ နေပယ်လ်ဟာအံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်, quintessential အီတလီမြို့. ဒါဟာတောင်ကုန်းနှင့်ပြည့်စုံသည်, အဟောင်းအဆောက်အဦးများ, နှင့်အခြားအသေးစားနှင့်ချစ်စရာအံ့ဘွယ်သောအမှု. ဒါဟာစစ်မှန်အီတလီဝိညာဉျကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့လိုလားတဲ့သူကိုလူတိုင်းနဲ့နေပယ်ကနေအကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စုံလင်သောအီတလီမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်. သို့သျောလညျး,…
မည်သို့ရန်ခရီးသွား Eco Friendly ခုနှစ်တွင် 2020?
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ကြှနျုပျတို့သညျဤသစ်ကိုဆယ်စုနှစ်ထဲသို့မဝင်ရအဖြစ် Eco ဖော်ရွေခရီးသွားကြှနျုပျတို့၏စိတျ၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်. ထိုကဲ့သို့သောရောဘတ် Swan နှင့် Greta Thunberg အဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်အတူ, ကမ္ဘာကြီးကိုဖို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည်လင်ရှင်းလင်းပြတ်သားနှင့်အတူကယ်နှုတ်တော်မူ၏နေပါသည်. We are running out of time to…
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, ရထားခရီးသွားခြင်း, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ သင်ရုံဂျာမနီမှာ Bavaria မှတဆင့်ခရီးစဉ်စီစဉ်စတင်ခဲ့ကြလျှင်, သငျသညျဖြစ်နိုင်ခရီးစဉ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေကြတယ်. သငျသညျအမြားဆုံးဖွယ်ရှိအလည်အပတ်ခရီးမှအံ့သြဖွယ်သောအရပ်နှင့်သက်သက်နံပါတ်လွှမ်းလျက်ရှိသည်. Plus အား, သင်တို့ရှိသမျှသည်တစ်ဦးမှာသူတို့ကို fit ချင် 10 ရက်ပေါင်းခရီးစဉ်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဥရောပကမ္ဘာပေါ်မှာမည်သည့်တည်နေရာနှင့်မတူဘဲဖြစ်ကြောင်းချမ်းလအတွင်းအခြို့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလကျက်သရေရှိပါတယ်. အမျိုးမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်, နှင့်မျှမတို့နှစ်ဦးကိုထိုအရပ်တို့၌တူညီသောခံစားချက်နှင့်လေထုရှိ. တကယ်တော့, များစွာသောလူအနေစဉ်အတွင်းကြောင်းမြို့ရွာနှင့်မြို့ကြီးများပြောပါ…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ...
5 picturesque မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်တွင်ရေကန် Como
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ တောက်ပအပြာရောင်ရေနှင့် luscious အစိမ်းရောင်တောင်များမှာထွက်ရှာဖွေနေစဉ်ရိုးရာအီတလီဗိသုကာနေရခြင်းသည်သင်၏နံနက်ကော်ဖီသောက်ခံစားရန်ထိုင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ. ကိုယ့်အိပ်မက်နဲ့တူဒီတန်ခိုးသည်အသံနေစဉ်, ကအံ့သြဖွယ်ရေကန် Como သွားရောက်ကြည့်ရှုသောသူတို့ကိုရန်အဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည် stunning…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ နော်မန်၏ဒေသပြင်သစ်၏အနောက်မြောက်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသမှာတည်ရှိပါတယ်နှင့်ဝေးပဲရစ်ကနေအတော်လေးတိုတောင်းခရီးစဉ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာမြောက်ပိုင်းပြင်သစ်၏အနှစ်သာရကိုခံစားချင်သောသူတို့၏အများအပြားများအတွက်ရေပန်းစားခရီးသွားဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်. နော်မန်အားလုံးကရှိပါတယ်, မှ…